Gam akporo 8.0 Oreo na-abịa Galaxy S7 na Galaxy S7 ihu na Spain | Gam akporosis
Eder Ferreño | | Nkuzi, Gam akporo nsụgharị
Samsung anaghị eguzo ọtọ maka ịbụ otu n'ime ụdị ndị ka mma na-emelite Oreo. N'ezie, ọtụtụ n'ime ekwentị ndị ahụ enwebeghị mmelite dị. Ọ dabara, Ndị ọrụ Galaxy S7 ma ọ bụ S7 Edge nọ na ihu ọma. N'ihi na melite gam akporo 8.0 Oreo abiala na Spain. Mgbe ọnwa nke ichere n’aka ndị ọrụ.
Nwelite na gam akporo 8.0 Oreo enweghi nsogbu. N'ihi na ọ bụghị ogologo oge gara aga ọ na-erute ndị ọrụ nwere Galaxy S7 ma ọ bụ S7 Edge, yana nkwekọrịta na Orange ma ọ bụ Vodafone. Ma ọ kwụsịrị. Ugbu a, ọ bịarutere n'ụzọ doro anya.
Yabụ ndị ọrụ nwere ụdị nke abụọ a n'efu ga-enweta mmelite ahụ. Ọ bụrụ na i nwebeghị. Maka na ọ dị ka ebidola ịba mba anyị, ya mere o kwesịrị ibu awa ole na ole tupu o rute n’ihu.
Gam akporo Oreo PHE dị ugbu a maka Galaxy S7 Flat pic.twitter.com/xY1cLe3wwP
Na Galaxy S7 na S7 Edge, na mgbakwunye na mmelite a na gam akporo Oreo, Samsung Ahụmahụ 9.0 dị ebe a, nke na-eweta ụfọdụ mgbakwunye ndị anyị hụrụ na Samsung kachasị elu na njedebe n'ahịa. N'ihi ya, ọ bụ ọtụtụ akụkọ ọnụ maka ndị ọrụ.
N'ehihie ụnyaahụ enwere ndị ọrụ natara OTA a gam akporo 8.0 Oreo na ngwaọrụ ha. Yabụ na enwere ike ịnata gị, ma ọ bụ ọ ga-ewe oge tupu ịme ya. Oge dị mkpa, n'ihi na enweela ọtụtụ nsogbu na mmelite ma ọ werela ogologo oge ịbata.
OTA nwere ibu nke 1,2 GB, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ya, ịnwere ike ịga n'okporo ụzọ na-esote na Galaxy S7 gị: Ntọala> Mmelite ngwanrọ> Ntuziaka aka. N'ebe ahụ ị nwere ike ịhụ ma ọ dịlarị. Maka ndị ọrụ na mba ndị ọzọ dịka Germany, Italy ma ọ bụ France, mmelite na-abịa ụbọchị ndị a kwa. Ya mere, ọ dị ka ọ ga-agafe Europe na izu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Samsung Galaxy S7 na S7 Edge melite gam akporo 8.0 Oreo na Spain
Achọrọ m otu tupu ụbọchị Nna maka World Cup